छाङरुमा भवन नपाएपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरी हिउँ छल्न भाडाको घरमा : एसएसबीलाई आग्रह 'हिउँदमा हाम्लाई केही भए उद्धार गरिदिनू'
19th November 2020, 09:43 am | ४ मंसिर २०७७
दार्चुला (छाङरु) : दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका १ छाङरु र तिंकरमा यसपाली हिउँदमा सुरक्षा फौज बस्ने भएको छ।
भारतसँग जोडिएको छाङरु र चीनसँग जोडिएको तिंकर गाउँको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको फौज यहाँ बसेको हो। यसअघिका वर्षहरुमा हिउँदमा प्रहरीहरु तल झर्दै आएका थिए। सशस्त्रको उपस्थिति थिएन।
यसपाली छाङरुमा १६० जना दरबन्दी रहने सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म नै स्थापना भएको छ। सरकारले गत असार अन्तिम साता सशस्त्रको ५० नम्बर गुल्मलाई सदरमुकाम खलंगाबाट छाङरुमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। डीएसपी धीरेन्द्र शाहको कमाण्डमा गुल्म स्थापना भइसकेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असोज ९ गते गुल्म भवनको शिलान्यास गरेका थिए। यद्यपि कात्तिकभित्र एक तल्ला ठड्याउने भने पनि भवन बनेन।
बस्नलाई भवन नपाएपछि अस्थायी रुपमा स्थानीय जितसिंह बोहराको होटललाई भाडामा लिएर गुल्म बनाएका सशस्त्र प्रहरीले उक्त होटलमै जाडो कटाउने भएका छन्।
छाङरुमा ७ फिटसम्म हिउँ पर्छ। ७ फिटको हिउँ परम्परागत घरमै बसेर कटाउन सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले जोहो थालेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले हिउँद कटाउन काठको अस्थायी बस्ने घर बनाएको छ। जसमा आगो बालेर हिउँ परेका बेला तापेर बस्न मिल्नेछ।
हिउँद कटाउन नेपाल प्रहरीले भाडामा लियो घर
नेपाल प्रहरी पनि यसपाली पहिलोपटक हिउँदमा छाङरुमा बस्दै छ। छाङरुको सीतापुलमा २०२७ सालमै प्रहरी चौकी स्थापना भए पनि द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको थियो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट केही प्रहरी मारिएका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि छाङरु र तिंकरमा प्रहरी फेरि खटिँदै आएको छ। तर अघिल्ला वर्षहरुमा हिउँदमा तल झर्दै आएको थियो। यसपटक सशस्त्रको गुल्मै स्थापना भएर बस्ने भएपछि प्रहरी पनि बस्ने भएको हो।
छाङरुमा प्रहरीको भवन जीर्ण छ। सामान्य मर्मत गरी कामचलाउ बनाइएको छ। प्रहरी कर्मचारीले हिउँद भने भाडाको घरमा काट्ने भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलका अनुसार ६ महिनाका लागि मासिक ८ हजार भाडा तिर्नेगरी स्थानीय अञ्जली बोहराको दुई तले घर भाडामा लिएका छन्। हाल छाङरुमा असई देवदत्त भट्टको कमाण्डमा प्रहरी चौकी सञ्चालनमा छ।
हिउँदमा छाङरुमा बस्ने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई राशन र लत्ताकपडाको चिन्ता छ। पर्याप्त राशन छैन। बाक्लो कपडाको पनि अभाव नै छ। 'राशनको समस्या छ। अब ढुवानी कसरी गर्ने?' एक प्रहरी अधिकारीले गुनासो गरे, 'कपडा र जुत्ता पनि छैन। दु:ख गरेर बस्या छौं। तर तल(खलंगा)कोले खाएर बसेको सोच्छ। दुर्गममा बस्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो छैन। हामीलाई बाह्रै मास बस्ने भवन आवश्यक छ।'
दुई महिनाअघि गृहमन्त्री भ्रमणमा आउँदा सशस्त्र बस्ने भए नेपाल प्रहरी किन नबस्ने भनेपछि प्रहरी पनि हिउँदमा जोहो गरेर बस्न लागेको हो। सशस्त्रको तुलनामा प्रहरी बस्ने घर बलियो र उचाईंमा छ। सशस्त्र बस्ने घर तिंकर खोलाको छेउ गागाबगरमा छ भने नेपाल प्रहरीले भाडामा लिएको भवन बस्तीको बीचमा उचाईमा छ।
उद्धारका लागि एसएसबीलाई अग्रिम अनुरोध
हिउँद याममा पहिलोपटक छाङरुमा बस्न लागेका सशस्त्र प्रहरी गुल्मले केही समस्या आए उद्धार गरिदिन काउन्टर पार्ट भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)लाई अनुरोध गरेको छ। 'हिउँदमा केही समस्या आयो भने एसएसबीसँग उद्धारका लागि अनुरोध गरेका छौं,' गुल्मका एक अधिकारीले भने, 'मानवीयताका हिसाबले भनेका छौं। उनीहरुको पिथौरागढमा हेलिकोप्टर स्टान्ड बाई हुन्छ। फाइटर प्लेन पनि आउँछन्। सहयोग गर्छौं भनेका छन्।'
सरकारले छाङरुका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने भनेको छ। तर हेलिकोप्टर सुर्खेतसम्म मात्रै छ। त्यहाँबाट छाङरु आइपुग्न समय लाग्छ। त्यसमाथि नेपालमा भनेको बेला आइपुग्दैन। त्यहीँ भएर जटिल समस्या भएमा भारतीयलाई सहयोग गरिदिन भनिएको ती अधिकारीले बताए। काठमाडौंमा भारतविरुद्ध लड्नुपर्ने गरी राष्ट्रवादी आवाज गुन्जिए पनि सीमामा नेपाली पक्षका आफ्नै दु:ख छन्। स्थानीयदेखि स्थानीय निकायसम्म भारतमै निर्भर हुन बाध्य छन्।
छाङरु र तिंकरमा बस्ने सुरक्षाकर्मीको अर्को गुनासो भनेको पर्याप्त भत्ता नहुनु। यहाँका सुरक्षाकर्मीले भारतका सुरक्षाकर्मीसँग आफ्नो तुलना गरेर पनि दु:ख मनाउ गर्छन्। सीमामा बस्ने भारतका सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको पर्याप्त भत्ताबाट आफूलाई धिक्कार्छन्।
छाङरुमा बस्ने सुरक्षाकर्मीलाई २० प्रतिश मात्रै भत्ता छन्। जसमा उनीहरुको चित्ता बुझाई छैन। उनीहरुको माग कम्तीमा छाङरुमा ५० प्रतिशत र तिंकरमा बस्नेलाई ६० प्रतिशत बढी भत्ता दिनुपर्ने भन्ने छ। 'भत्ता बढी पाइएला भनेर जोखिम मोलेर यो ठाउँमा आइयो। एउटा चाउचाउकै ८० रुपैयाँ छ। भत्ता छैन। कसरी बस्ने,' एक सुरक्षाकर्मीले गुनासो गरे।
सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, 'हाम्रो त गुल्म भएर सबै आउनै पर्‍यो। पुलिसको आउनै मान्दैन। यहाँ जनशक्ति ल्याउन धौ धौ छ। सजाय दिएजस्तो भएको छ। भत्तामा सरकारले केही हेरिदिए हुन्थ्यो।'
Tamang Sing Asman[ 2020-11-20 12:30:55 ]
थुइक्क जात फाल्नु गहतको झोलमा भनेको यहि हो। हाम्रै भुमिको सुरक्षा गर्न खटिएको सशस्त्रले अन्त्यमा भारतको सुरक्षा बल संग गुहार माग्यो । भ्रस्ट र चोरहरुले गाजिएको देश नेपाल नेता देखि सरकारी कर्मचारी सम्म आमा बेचुवा हरुको देश नेपाल र तेसै देशको रमिते जनता हामी धन्न हो हाम्रो गौरभ शाली ईतिहास र बर्तमानमा हुतिहाराहरुले भरिएको देश नेपाल। मल नभएर बङलादेश संग भिख माग्ने सरकारले सेना चाहिँ ज्यान बचाउन भारतिय संग भिख माग्ने स्याबास भ्रस्टाचार गर्नचाही छोडनु हुदैन।
Dipesh Kuwar[ 2020-11-20 10:51:38 ]
एउटा अोत लाग्ने छानो दिन नसक्ने सरकारले k सुरक्षा फौज राख्ने सबै खारेज गरे हुन्छ आफ्नो ज्यानको सुरक्षा छैन जनता र देशको सुरक्षा कसरी गर्नि धिक्कार छ हाम्रो सरकार
Mohan S. Dhami[ 2020-11-20 07:19:29 ]
Til Bikram Kandangwa[ 2020-11-20 09:20:25 ]
सरकार ! झगडा गरेर देस बर्बाद बनाउने हैन ,सुरक्षाकर्मीहरुलाई सुरक्षित बसोवासको प्रबन्ध गर ।
Padam Rai[ 2020-11-21 05:12:22 ]
अहिले सुरक्षा निकायको पहिलो प्राथमिकता भनेको जाडोमा कसरि राम्रोसँग बस्न अनि सुरक्षा गर्न सकिन्छ तेता ध्यान दिनुपर्नेछ सम्भबत पहिलोपटक रासन लत्ताकपडा संचार सेवा उद्दार सामग्री जसरि हुन्छ सरकारले चाडैं राम्रोसँग ब्याबस्था गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कुराको कमि नहोस
Dharma Shakya[ 2020-11-21 02:38:36 ]
अब केन्द्रमा स्मार्टसिटी भ्यू टावर हाउंजिग बाहिरी चक्रपथ बनाउंने पैसाले सिमानामा बस्ने सुरुक्षाबल तथा ग्रामिण जनताहरुलाई आवश्यक बाटोघाटो झोलुंगेपुल घर खाद्यानको लागी खर्च गरियोस अनि पो देश बच्छ ।
Deepak Raj Rokka[ 2020-11-21 03:31:36 ]
अतिनै शर्म हराई सकेका छन् .. भारत सङ्ग सहयोग माग्ने..
Suni Purkuti[ 2020-11-20 08:42:13 ]
YO NEPAL POLICE NAI HOINA, INDIA KO APF POLICEHARU HO TAI VAYEARA VIK MAGNA JANXA NE, LAG PACHEKO MULA HARU 😃😃😃
Himal Tamu[ 2020-11-22 04:44:45 ]
यसको दोष २६० बर्ष देखि लुटेको शाह त्यसपछि राणा अनि बाहुनहरुले नेपालको जिम्मा लिनुपर्ने छ ।आखिर किन भएन नेपाल बिकासित धनी राजा संग अहिले अर्बौंको समप्ती रहेको छ राणाले अर्बौंको समप्ती लुटेर भारत पसेको छ अनि अहिले बाहुन चप्पलल लगाएर सिंगादरबर र कार्यलय प्रमुख भएर देश यसरी चुसेको छ कि यिनिहरुले रामा गिता पुराण पढेपनी त्यसको कुनै अर्थ लाग्ने छैन चोर हुन यिनिहरु संसारको सबैभन्दा कुकुर हुन अहिले महा खत्तम बाहुनहरु
Shubhash Bhujel Bhujel Subhash[ 2020-11-21 03:04:09 ]
नेताहरुलाई करोड को गाडी सुबिधा तर सिमा मा बस्ने सुरक्षाकर्मी लाइ उचित राशन को ब्यबस्था पनि नहुनु सरकार को ध्यान कहिले जाने ?
Raj Karki[ 2020-11-20 08:52:57 ]
जसरी पनि भारतीयको शरणमा पुग्छन् नेता सैनिक सशस्त्र नेता मन्त्री यो गुलामी देखि कहिले छुटकारा मिल्छ नेपालीलाई प्रचण्ड र अाली संगठन मिलाउन लडाइँ चलेको छ सिमानामा फाईटर अाउछ किन चाहियो सिमानामा सशस्त्र भारतीयलाई गुहार माग्न पठाएको होला
Deepak Kc[ 2020-11-20 12:25:57 ]
भारत मा फाइटर आउँछ यता ओलि बा र प्रचण्डको फाइटिङ छ।
Shanta Magar[ 2020-11-22 02:00:50 ]
Asthai Ghar banaidinu nasakne k sarkar
Kamal Karkii Dolhi[ 2020-11-20 02:32:41 ]
Ani atro hunxa simana ko suraxaa
Samrat Giri[ 2020-11-21 02:28:20 ]
Thukka nalayak sarkar
Tejindra Jung Adhikari[ 2020-11-21 06:49:52 ]
दुर्भाग्य नै हो सीमामा तैनाथ सैनिक को यस्तो हाल हुनु,
गौरब राजा सुर्यबंशी[ 2020-11-20 09:55:07 ]
sima suraxya karmi ko yo halat x 😰😰😰😰😰
Neeraj Joshi[ 2020-11-21 07:38:31 ]
Laaj lagnu parne ...tysaile ma ta bhanxu. Come Back King
Jeewan Khaniya[ 2020-11-20 11:24:15 ]
अनि भुत्राको सिमा रक्षा गर्ने? उद्धार गरैछ सिमा पनि मिच्छ भारतीयले
Dhan Rana[ 2020-11-22 05:56:18 ]
Haaaaa कति लज्जासपद
Maksud Ansari[ 2020-11-22 02:35:46 ]
लाजमर्दो समाचार के हो बास्तबिकता ??
Sudhir Kumar[ 2020-11-22 12:59:29 ]
Koli chor ra yinka bharauteharu le jati corruption gareko6 tyati le matrai deshko simanama chahe jati security post banauna sakin6a.... thukka nalayak sarkar
Simon C Mon[ 2020-11-22 03:12:32 ]
Opendra Birahi Reule[ 2020-11-22 12:37:54 ]
Kathai mero desh
Nirpa Kathayat[ 2020-11-21 09:58:09 ]
kathai maro desh